Ukumiswa Ngocingo Abenzi, abahlinzeki - China Ukumiswa Ngocingo Factory
Aluminium ihange ngocingoPA ...
Isingeniso Ingxabano ngocingo isetshenziselwa ekhoneni, uxhumano, futhi conne esibulalayo ...
Xhumanisa kufaneleka ukuxhuma i-insulator nokufakwa ku-ultra voltage transmission ...
Uhlobo ngocingo NLD-1
Uhlobo lwenkinga, uhlobo lwe-bolt, uhlobo lwe-NLD series bolt tension clamps lusetshenziswa kakhulu ...
ukumiswa ngocingo XT 4022
Ground kabili ilenga iphuzu esontekile ukumiswa ngocingo Umzimba Ngocingo k ...
Ukumiswa kokumiswa kwabaqhubi bamawele amawele
Ikhathalogu Cha Kusebenza ngocingo lobukhulu Ubukhulu obukhulu） mm load Umthwalo ocacisiwe wokuhluleka, KN, Isisindo （kg, L1 L2 CR h, M XTS-1 18 ~ 24 200 50 19 13 57 18 16 70 4.5 XTS-2 25 ~ 31 200 56 19 16 62 18 16 70 5.0 XTS-2A 17 ~ 21 200 50 19 11 57 18 16 70 4.5 XTS-2B 21 ~ 27 200 52 19 14 59 18 16 70 5.0 XTS-5 23 ~ 33 200 60 20 17 55 18 18 100 4.2 XTS-6 34 ~ 45 ...
Ukumiswa ngocingo J-hook uhlobo
Ucingo lokumiswa lwenzelwe ukufakwa nokumiswa kwezintambo ezine eziyizisekelo ze-LV-ABC ezigxotsheni noma ezindongeni. • Uqinisa lwenziwe ngensimbi eshisayo kanye nensimbi emelana nesimo sezulu • Ifakwe i-shear head bolt. I-clamp ingafakwa kalula ngaphandle kokonakala kwe-cable insulation • Azikho izingxenye ezixekethile • Okujwayelekile: EN 50483-2 Catalog No. Umqhubi ofanelekile i-JSC-1 4 × 16 ~ 35mm2 JSC-2 4 × 50 ~ 120mm2 JSC-3 4 × 50 ~ 70mm2 ...
ukumiswa izibopho zekhebula le-ABC
Uchungechunge lwe-XJG lufanelekile ukuba ngumqhubi wokumiswa kocingo lwasemoyeni, luhlinzeka ngohlobo lwe-Hook, uhlobo lwe-hinge nohlobo lokuthekelisa lwabasebenzisi.
NYLON-ukumiswa-ngocingo ikhebula ABC
1A 1B ukumiswa ngocingo zenzelwe ukumisa self ukusekela LV-ABC ikhebula ezigxotsheni nge ngci isithunywa ngci. Sihola umkhiqizi we-NFC Type Suspension Clamp futhi inqubo yokukhiqiza i-injection molding, izinto ezisetshenzisiwe yi-UV Resistant Glass Egcwaliswe Inayiloni, izinzuzo umkhiqizo onazo ngoba wenziwe ngepulasitiki uvinjelwe ngokuphelele futhi awunazo izingxenye ezikhululekile , ikhebula lingabanjwa ngokulungiswa kwesigwedlo sohlobo lokucindezela. Sethula ...
Ukumiswa ngocingo (uhlobo trunnion)
XGU uchungechunge trunnion uhlobo oluthambile yensimbi ukumiswa ngocingo / isigxobo kagesi ngocingo ikakhulukazi esetshenziselwa phezulu ulayini kagesi, okwesikhashana umqhubi phezu yisivikelo noma umbani conductor on umbhoshongo isibani ngokusebenzisa nokuxhuma nokufakwa. Yenziwe nge-aluminium alloy, ngokulahleka okuncane kwe-magnetic hysteresis & eddy yamanje kanye nesisindo esincane nokufakwa okulula. Ifinyelele kuzinqubo zokonga amandla nokusetshenziswa kokuncishiswa kokwakhiwa kabusha kwegridi yombuso waseChina. Nini ...
Iphuzu lokulengisa eliphansi eliphindwe kabili lomugqa wangaphambi kokumiswa okusontekile Umzimba wensimbi kanye nabagcini benziwe nge-aluminium alloy I-Cotter-izikhonkwane zenziwe ngensimbi engagqwali, Ezinye izingxenye zishisiwe nge-hot-dip. (1) I-engela elengayo lesigaxa sokumiswa alikho ngaphansi kwama-25 °. (2) Ububanzi bokusonga kwesiqeshana socingo esilengayo akumele sibe ngaphansi kwezikhathi eziyi-8 zobubanzi bocingo olufakiwe. (3) Amandla okubamba kwesiqeshana socingo lokumiswa ezintanjeni ezihlukile nephesenti lezilinganiso ezilinganisiwe ...
ukumiswa ngocingo XG 4022
Ukumiswa ngocingo （isikhwama uhlobo） Isiqeshana sokumiswa kwensimbi sisetshenziselwa kakhulu izintambo zamandla aphezulu noma iziteshi. Umqhubi wocingo nombani umisiwe ocingweni lwe-insulator noma umbani womlilo umisiwe embhoshongweni wesigxobo ngokuxhuma izinsimbi zensimbi. Yenziwe ngezinhlobo ezimbili zezinto zokwakha: i-iron ne-aluminium alloy. I-engeli elengayo yesiqeshana socingo lokulengiswa kufanele hhayi ngaphansi kuka-25, futhi i-radius ye-curvature ngeke ibe ngaphansi kwezikhathi eziyisishiyagalombili zobubanzi be-inst ...
ukumiswa kocingo CGH
Ukumiswa Kocingo type Uhlobo lwe-Envolope） XGH uchungechunge lokumiswa kochungechunge kusetshenziselwa ukuxhuma abaqhubi kubafakeli. Umzimba we-Clamp nabagcini benziwe nge-aluminium alloy I-Cotter-izikhonkwane zenziwe ngensimbi engagqwali, Ezinye izingxenye zishisiwe nge-hot-dip. Ikhathalogi No. I-Conductor Dia Efanelekayo. （Mm dim Ubukhulu obukhulu (mm) Umthwalo Ocacisiwe Wokwehluleka (kN) Isisindo (kg) HCMRL XGHICGH) -2 5.1-12.5 52.5 25 16 18.0 166 40 1.0 XGHICGH) -3 12.4-17 50 .. .